Natiijada Kulamadii xalay ee Barnaamijka Kediska SBC – SBC
Natiijada Kulamadii xalay ee Barnaamijka Kediska SBC
Posted by Webmaster on June 20, 2015 Comments
Tartanka Kediska Ramadaanka SBC oo galay habeenkii labaad waxaa xalay fooda isku daray xaafado ka mid ah 24-ka Xaafadood ee ka qeyb galaya kuwaa soo kala ahaa , Xingood Qardho Vs Waaberi Garowe
1da August Garowe Vs Geeldoora Baran.
Tartankii hore oo dhexmaxay Xaafaddaha Xingood Qardho Vs Waaberi Garowe ayaa ahaa mid xiiso leh, waxaana labada xaafadood ay ahaayeen kuwo aad isu soo adkeeyay diyaar garowgooduna ahaa mid aad u sareeya.
Gaba gabadoo tartanka ayaa waxaa lagu dhawaaqay natiijada ka soo baxday, waxaana labadaasi xaafadood ay noqdeen kuwo barbar dhac ku dhameystay tartankoodii.
Xingood Qardho 10-10 Waaberi Garowe.
Wareegii labaad oo aheyd aheyd in uu tartan la wada sugayay dhexmaro xaafadaha kala ah, 1da August Garowe Vs Geeldoora Baran ayaan suurta galin ka dib markii ay soo bexeen cillado soo wajahay xaafadda ka dhisan Degmada Baran ee gobolka Sanaag, waa Geeldoora Baran.
Waqti dheer oo ay qaateen ka dib waxaa arrintaasi go’aan ka soo saaray gudiga Kediska Ramadaanka SBC, waxaana lagu dhawaaqay Natiijo ForFite ah oo xaafadda 1da August Garowe lagu siiyay 12 dhibcood oo nadiif ah.
Waxaa xusid Mudan in Barnaamijka xalay si toos ah loogaga daawanayay Tv-ga Caalamiga ah ee SBC aduunka oo dhan, halka gobolada Puntlandna laga dhageysanayay Idaacadda SBC.
Caawa oo ah Habeenkii sedaxaad waxaa Kediska ku kulmi doona 4ta xaafadood ee hoos ku qoran.
Goljanno Waciye vs Sandhubo Bargaal
Golis Carmo vs Hodan Garowe